Uncategorized Archives - समृद्ध नेपाल
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने माओवादीको निर्णय!
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद भए पनि चार जना पार्टी परित्याग गरेकाले माओवादीसँग हाल सभामुखसहित ४९ जना सांसद मात्रै छन् भने एमालेका १२१ सांसद छन्
औषधि व्यवस्था विभागका तीन जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। दुई जना फार्मेसी निरीक्षक र एक जना व्यवस्थापकलाई संक्रमण देखिएपछि विभागले आफ्नो नियमित कामहरु प्रभावित भएको जनाएको छ। नविकरणबाहेक अरु काम तत्कालका लागि स्थगित गरिएकाे विभागले जानकारी दिइकाे छ। कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराईसहित ८ जना बढी कर्मचारीहरु होम आइसोलेसनमा
यो भाईलाई तपाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
आफनो घर्म अनुसार आआफना भगवान हुन्छ्नहरेक धर्मका आ आफना मुल्य मान्यता हुन्छन धर्म कसैको ठुलो कसैको सानो भन्ने हुदैन । एक धर्म ले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्न सिक्नु प्रदछ ।धर्मको नाममा द्वन्द्व मच्चाउनु महा पाप हो आखिर कति दिन होर हाअमि बाच्ने नेपाल बहु जाति बहु सास्किति रितिरिवाज ले भरिपुर्न देशको यहाका मानिसहरु मिलेर बसेका
कर बुझाउने म्याद बढाउन नाडाको सरकारसँग माग
काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले कर विवरण तथा कर बुझाउने म्याद थप गरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ ।हाल सरकारले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण आन्तरिक राजस्व विभागमा मूल्य अभिबृद्धि कर विवरण एवं कर रकम बुझाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै स्वास्थ्य रक्षाको दृष्टिकोणले पनि व्यवसायीहरु आफनो कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था
बोतलमा भएको यस्तो सन्देशले जोगायो एउटा सिंगै परिवारको ज्यान एजेन्सी । अमेरिकामा एउटा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यको ज्यान बोत्तलमा लेखिएको एउटा ‘शब्द’का कारण जोगिएको छ । तीब्र बहाव भएको एउटा झरनामा फसेको परिवार बोत्तलमा लेखिएको सन्देशका कारण जोगिएको हो । झरनामा फ सेका परिवारका सदस्यहरुले बोत्तलमा एउटा शब्द लेखेर फोलेका थिए । सन्देश लेखिएको बोत्तल झरनाको
उदयपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकृतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि !
जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरका एक अधिकृतमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आज बिहान गरिएको एन्टिजेन टेष्टबाट उनिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।संक्रमण पुष्टि भएसँगै उनी होम आईसोलेसनमा बसेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाईले खासै त्यस्तो लक्षण नदेखिएकाले कार्यालयकै क्वाटरमा एक्लै सुरक्षितसाथ बसेको बतानुभयो । दुई/ तीन दिन अघिदेखि कोरोनाको जस्तो लक्षण
नेपालमै बनेको पहिलो इलेक्ट्रोनिक बाइक चढे कुलमान घिसिङ !
नेपालमै बनेको पहिलो इलेक्ट्रोनिक बाइकमा कुलमान घिसिङ नेपाली युवाहरुको डिजाइनमा तयार भएको ‘यात्री’ नामक विद्युतीय मोटरसाइकल कम्पनिले बिक्रीको लागि लन्च गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल बाट लिइएको यस्तो छ नेपाली इन्जिनियरले बनाएको विद्युतीय मोटरसाइकल ‘यात्रीनेपाली युवा इन्जिनियर टोलीले बनाएको विद्युतीय मोटरसाइकल यात्री सार्वजनिक भएको छ। ४ जना इन्जिनियर सहितको ७ जनाको टोलीले ‘यात्री’ डिजाइन स्टुडियोको स्थापना
आफ्नै छोरीको यस्तो भिडियो पत्रकार सम्मेलनमा देखाउन ‘बिवस बाबु’ !
स्थायी घर बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका–१ की वर्ष २२ की तुलसी तिमल्सिना बेपत्ता भएको भन्दै उनको परिवार मिडियामा आएको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तुलसीका बुवा शिवराज तिमल्सेना भाइहरूसहित आएर छोरी कहाँ छिन्? भन्दै सत्य, तथ्य बाहिर ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् परिवारका अनुसार गत साउन १७ गते तुल्सीलाई अछाम मंगलसेन
उनी फोनमा बोल्दाबोल्दै रोकिए। शब्द नपाएर होइन, भन्न नसकेर। सकून् पनि कसरी! केही दिनअघि फुरूक-फुरूक यताउता उफ्रिने उनकी कान्छी छोरी अहिले यो दुनियाँमा छैनन्। बिरामले होइन, दुर्घटनामा परेर पनि होइन उनकी आँखाकी नानीलाई चुँडेको आपराधिक मानिसकताले हो। जनवरी २१ यता बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका-३ खुरखुरेका खड्गबहादुर कामीलाई दिन र रात उस्तै लाग्छ-निष्पट्ट अँध्यारो। ‘म राम्ररी होसमा छैन सर,’ केहीबेर रोकिएपछि